सिक्किममा भव्यताका साथ पालन आठौं विश्व योग दिवस
गान्तोक, 21 जून (हि.स.)। राजधानीको इञ्चे गुम्पा परिसरमा मंगलवार बिहान ‘आठौं अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस 2022’ पालन गरियो। यस अवसरमा राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि तथा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ विशिष्ट अतिथि थिए। केन्द्रिय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता मामिला, खाद्य एवं जन वितरण राज्य मन्त्री अश्विनी कुमार चौबे विशेष अतिथिको रूपमा सहभागी बनेका थिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यपाल प्रसादले भने, योग ऋषिहरूले विश्वलाई प्रदान गरेको उपहार हो। ऋषिहरूले तप गरेर जीवनको यस रहश्यलाई उद्घाटित गरे। योग भारतको दैविक सम्पदाको अंग हो र विश्वले आज यसलाई अपनाइरहेको छ। राज्यपालले योग हाम्रो मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक विकासको साधन रहेको बताए। हामीलाई हाम्रो प्राचीन दर्शनमाथि गर्व छ भन्दै विश्वले आज योगलाई स्वीकार गरिरहेको उनले बताए। उनले यसपाली मानवताका लागि योग थीममाथि विश्वभरि योग दिवस पालन भइरहेको पनि जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्री तामाङले आज देशका 75 महत्वपूर्ण ठाउॅंमा योग दिवस पालन भइरहेको बताउॅंदै सिक्किमको इञ्चे गुम्पालाई पनि ती प्रतिष्ठित ठाउॅंहरूमा सामेल गरिएको बताए। राज्यको निम्ति यो गर्वको विषय रहेको बताउॅंदै उनले भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए। उनले अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा राज्यवासी, देशवासी र योग उत्साहीहरूलाई सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गरे।
उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बहुमूल्य योगदानका कारण आज विश्वव्यापी रूपमा धुमधामसॅंग योग दिवस पालन भइरहेको पनि बताए। यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई एवं कृतज्ञता पनि व्यक्त गरे। उनले शारीरिक र मानसिक कल्याणका लागि दैनिक जीवनमा योग अभ्यासमाथि बल दिए। उनले सिक्किम राज्य प्राकृतिक रूपमा योग अभ्यासका लागि उपयुक्त स्थान रहेको उल्लेख गर्दै राज्य सरकारले योगलाई व्यापक बनाउन काम गरिरहेको पनि बताए।
यसैगरी, केन्द्रिय मन्त्री अश्विनी कुमार चौबेले आज विश्वव्यापी रूपमा योग दिवस महोत्सवको रूपमा पालन भइरहेको छ भनी बताए। अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उद्बोधन विश्वका लागि प्रेरणादायक रहेको बताए। उनले भने, भारत परिवर्तन भइरहेको छ। भारतले जे गरिरहेको छ, त्यसलाई विश्वले अनुसरण गरिरहेको छ। योग भारतीय पुरातन संस्कृतिको भाग हो। उनले योगलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा मान्यता दिलाउन प्रधानमन्त्रीले दिएका योगदानको प्रशंसा गरे।
यस अघि कार्यक्रममा उपस्थित सबै गणमान्य जनले योग अभ्यासमा भाग लिएका थिए। यस अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री डा. मणिकुमार शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा, मन्त्रीगण, विधायकगण, लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, विभिन्न विभागीय अधिकारीगण आदि पनि उपस्थित थिए।
Previous: केन्द्रिय राज्यमन्त्री अश्विनी चौबे गान्तोकको योग दिवस कार्यक्रममा
Next: प्रेस क्लब अफ् सिक्किम र राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू माझ समन्वय बैठक